आज ऋषितर्पणी, रक्षाबन्धन र जनैपूर्णिमा (ऐतिहासीक महत्वसहित)
२ भाद्र २०७३
२ भदौ, काठमाडौँ। प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा मनाइने ऋषितर्पणी, रक्षाबन्धन एवम् जनै पूर्णिमा आज मनाइँदैछ ।सत्ययुगमा दानवद्वारा लखेटिएका देवगणलाई गुरु बृहस्पतिले रक्षा विधान तयार गरी जेले गर्दा अत्यन्त बलशाली दानवराज बली बाँधिए, त्यसैले म तिमीलाई बाँध्छु, यसले तिमी सुरक्षित बन, विचलित नहोऊ भनी डोरो बाँधेर जोगाएका थिए भन्ने पौराणिक मान्यताका आधारमा रक्षाबन्धनको परम्परा चलेको शास्त्रहरूमा उल्लेख छ । यसैकारण रक्षाबन्धन गर्ने बेलामा गुरु…विस्तृत समाचार »
यस्तो छ,प्रचण्डलाई असफल पार्ने एमालेको ‘गोप्य प्लान’
१ भाद्र २०७३
१,भदौ,काठमाण्डौं । आफ्नै कारणले माओवादीसंगको सत्ता समिकरण टुटाएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रचण्ड सरकारलाई असफल पार्नका लागि नयाँ गेम खेल्ने तयारी थालेका छन्। एमालेभित्रै ओलीले माओवादीलाई धोका दिएको आरोप मथ्थर नभएको बेला ओलीले प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई असफल पार्न नयाँ योजना बनाएका हुन् । हाल एमालेको स्थायी समितिको वैठक पनि बसीरहेको छ । वैठकमा बोल्ने अधिकाशं नेताले समेत ओलीले माओवादीसंग बेइमानी गरेको आरोप लगाएका थिए…विस्तृत समाचार »
प्रचण्ड सरकारलाई पत्याएन चीनले,चीनबारे स्पष्ट हुन सुझाव
१,भदौ,काठमाडौं । पूर्ववर्ती सरकारले चीनसँग गरेको सन्धि–सम्झौता तथा सहमति पालना हुनेरनहुनेमा चीनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्व सरकारसँग नीतिगत स्पष्टता खोजेको छ । नयाँ सरकारका विशेष दूतका रुपमा चीन भ्रमणमा रहेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच मंगलबार बेइजिङमा भएको भेटवार्तामा चीनले नेपाल–चीन सन्धि–सम्झौता यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा जोड दिँदै नेपालसँग यसबारे ‘नीतिगत स्पष्टता’ र ‘नीतिगत स्थिरता’ मागेको हो । नेपाल–चीन सन्धि–सम्झौता यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा उसको…विस्तृत समाचार »
यसरी असोजभित्रै तयार हुदैछ मुलपानी इन्टरनेश्नल क्रिकेट ‘स्टेडियम’ (फोटोफिचर )
३२ श्रावण २०७३
केशबराज जोशी,काठमाण्डौं । नेपालमा अहिलेसम्म एउटा पनि अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको क्रिकेट स्टेडियम छैन । आइसीसीका सबै मापदण्ड पुरा गरेपछि मात्रै विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च संस्थाले सो मैदानलाई अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्रदान गर्दछ । त्यस्तो अवस्थामा जुनसुकै देशका एकदिवसीय,टेष्ट र ट्वान्टी–ट्वान्टी खेलहरु खेलाउन सकिन्छ । नेपाली क्रिकेट खेलाडी र फ्यानका लागि निकै खुसीको सन्देश छ कि अब २ महिनाभित्रै नेपालमा अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तयार हुदैछ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद…विस्तृत समाचार »
बादलसहित एकतामा आएका माओवादी नेतालाई वालुवाटारमा प्रवेश निषेध !
३२,साउन,काठमाण्डौं । सुन्दा विश्वास नलाग्न सक्छ तर अपत्यारीलो रहस्य आएको छ माओवादी केन्द्रको बारेमा । आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुदासमेत पार्टीकै नेताहरुलाई वालुवाटार छिर्न नदीने तयारी रहेको रहस्य बाहिर आएको छ । रामबहादुर थापा बादलगायत एकतामा आएकाहरूलार्इ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएर वालुवाटार सरेसँगै वालुवाटार प्रवेशमा निषेध गरिएको रहस्य खुलेको छ । स्रोतका अनुसार सुरक्षा निकायले एकता प्रक्रियाबाट आएकाहरुसँग हतियार हुन सक्ने र…विस्तृत समाचार »
नेपालको उत्कृष्ट कमब्याक, नेपालद्धारा नेदरल्याण्ड १९ रनले पराजित
३१ श्रावण २०७३
३१ साउन काठमाडौ । आइसिसि वल्र्ड च्याम्पिेनसिप अन्त।गत नेपालले नेदरल्याण्डलाई १९ रनले पराजित गरेको छ । अघिल्लो खेलमा लजास्पद हार बेहोरेको नेपालले युरोपियन पिचमा उत्कृष्ट कमब्याक गर्दै नेदरल्याण्डलाई हराएको हो । नेपाललाई जिताउनको लागि पारस खड्काले २, सोमपाल कामीले २ तथा बसन्तले २ विकेट चट्काए भने शक्ति गौचन, सन्दिप लामिछाने र सागर पुनले एक÷ एक विकेट लिए । नेपालले दिएको २ सय १८ रनको टार्गेट…विस्तृत समाचार »
काभ्रेमा बस दुर्घटना,१७ को शव फेला,विस्तृत विवरण आउन बाँकि
३१,साउन,काठमाण्डौं । काठमाडौंबाट काभ्रेको कात्तिके देउराली जाँदै गरेको बस विर्ता देउराली ७ को खहरेखोला नजिकै दुर्घटनामा परेको छ। बा २ ख १०६ नम्बरको यात्रुबाहक बस दुर्घटना भएको हो। दुर्घटना भएको बस सडकबाट २ सय मिटर तल झरेको काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यलयले जनाएको छ । बसमा करिब ४० जनाभन्दा बढी यात्रु भएको अनुमान गरिएको छ। प्रहरी घटना स्थलमा पुगेर उद्धारमा लागिसकेकाले अहिले नै कति मानवीय क्षति…विस्तृत समाचार »
पेरिसडाडामा सल्कीयो आगो ,बादलसहित एकतामा आएकाको छुट्टै भेला
३१,साउन,काठमाण्डौं । नेकपा माओवादी केन्द्रमा मन्त्रीको विवादको संकट नटर्दै अर्को महासंकट आइलाग्ने देखिएको छ । विभिन्न पार्टी तथा घटक मिलेर नेकपा माओवादी केन्द्र बनेको माओवादीमा एकताबाट आएकाहरुले छुट्टै भेला गरेका छन् । एकिकृत माओवादीबाट आएकाहरुले पार्टीमा दादागिरी र हैकम जमाउन थालेपछि एकताबाट आएका नेताको भेला भएको बैठकमा सहभागि एक नेताले बताए । एकता गर्दा प्रचण्डले गरेको बाचा विर्सन खोजेको निष्कर्ष निकाल्दै भेला राजधानीको एक होटलमा भेला…विस्तृत समाचार »
माओवादी केन्द्रका दुई केन्द्रीय सदस्यको यौनकाण्डले पेरिसडाँडामा भूइँचालो
३१,साउन,काठमाण्डौं । माओवादी पार्टी कार्यलय पेरिसडाँडामा यौनकाण्ड सम्बन्धी निवेदन दर्ज भएसँगै हल्लीखल्ली मच्चिएको छ ।दुई केन्द्रीय सदस्यले अर्कोको श्रीमतीलाई जर्वजस्त गर्न खोजेको व्यहोराको उजुरी पार्टी केन्द्रीय कार्यलयमा दर्ज भएको बुझिएको छ । पार्टीका दुई केन्द्रीय सदस्य विरुद्ध नै उजुरी परेपछि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले घटनाको सत्यतथ्य बुझ्न दुई सदस्यीय छानबिन समिति बनाइ काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएकाछन । माओवादी स्रोतका अनुसार पार्टी केन्द्रीय सदस्य गणेश…विस्तृत समाचार »
यी हुन् प्रमुख पार्टीभित्रका प्रमुख प्रतिपक्षी नेताहरु ! कहिले उग्र कहिले मौन
३१,साउन,काठमाण्डौं । त्यसो त एउटै परिवारमा पनि सबैको विचार र मन मिल्दैन । तर समान्य रुपमा पनि विचार र मन नमिल्दा त्यहीबाट कलह सुरु हुन्छ र त्यही कलहले उग्र रुप लिदा परिवार विभाजनसम्म हुन पुग्दछ । विभाजन जुनसुकै क्षेत्रका लागि भएपनि त्यो आफैमा अप्रिय हुन्छ । नेपाली राजनीतिमा पनि यस्तै एउटा रोग छ, पार्टीभित्रै प्रतिपक्षीको भुमिका । राजनीतिमा प्राय प्रतिपक्षी विपक्षी पार्टी वा सरकारका विरुद्ध हुन्छ…विस्तृत समाचार »
‹ First Newer 1033 1034 1035 1036 1037 Older Last ›